Wasiirka Gaashaandhigga iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay – idalenews.com
Wasiirka Gaashaandhigga iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo maanta dalka dib ugu soo laabtay
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta dib ugu soo laabtay caasimadda ayaa ka warbixiyay shir caalami ah uu kaga soo qeybgalay magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Mudane C/Xakiim Maxamuud Xaaji Fiqi Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya oo ay wehliyen Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Jamaal Maxamed Barrow, Taliyaha Ciidamada Xoogga dalka S.gaas C/qaadir Sh. Cali Diini ayaa subaxnimadii manta dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho, kadib markii ay Magaalada Ankara ee dalka Turkiga uga soo qeybgaleen Shir Muhim ah oo looga hadlayay sidii dib u dhis balaaran loogu sameyn lahaa ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo sidii beesha caalamka u kordhin laheyd taageerada ay Soomalaiya ka siiso xagga nabadgelyada.
Wasiirka Difaaca C/xakiim Maxamuud Xaaji ayaa saxaafadda uga warbixiyay sida uu u qabsomay Shirkii uu kaga soo qeybgalay Turkiga waxa uuna xusay inuu si guul ah kusoo dhamaadey ayna kasoo qeybgaleen mas’uuliyiin ka socotay Dowladaha Midowga Yurub, Jaamacadad carabta iyo Midowga Afrika.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya iyo wefdigiisa ayaa sidoo kale intii ay ku sugnaayeen dalka Turkiga la kulmay Wasiirrada Gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda dalka Turkiga oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal loona kordhin lahaa Taageerada Turkiga ee Soomaaliya.
Wax walba oo aad rabto in aad ka,ogaato kulanka Tottenham vs Manchester United